Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. काठमाडौं उपत्यकामा पुनः ३८ संक्रमित थपिए, सभा सम्मलेन नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी – Janata Live
काठमाडौं, १६ साउन । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा थप ३८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण फेला परेको छ ।
आज (शुक्रबार) काठमाडौंमा ३२, ललितपुरमा ५ जना र भक्तपुरमा एक जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले संक्रमितको ठेगाना सरकारले खुलाएको छैन । नेपालमा आज थपिएका २२४ जना संक्रमितमध्ये ३८ जना काठमाडौं उपत्यकाका भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप २२४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन् ।
आज थपिएकासहित नेपालमा संक्रमितको संख्या १९ हजार ७७१ जना पुगेको छ । शुक्रबार थप १५१ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसहित नेपालमा हालसम्म १४ हजार ३ सय ९९ जना उपचारपछि निको भएका छन् । नेपालमा हालसम्म ५६ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।